ITrovaWeb ifika eTurin: isivumelwano neXRiba sokuphatha amadokhumenti ama-accounting
UTrovaWeb ufika eTurin: isivumelwano neXRiba sokuphathwa kwemibhalo ye-accounting
Isigaba esisha seTrovaWeb RoadShow enhlokodolobha yasePiedmontese
Isigaba esisha esijabulisayo se-Roadshow yango-2019 ehlelwe ngu I-TrovaWeb. Namuhla singena ithenisi, kokubhalwa kwezivumelwano ezintsha zentengiso nobambiswano emkhakheni I-AI.
Esigabeni sePiedmontese se I-Roadshow kaTrovaWeb, i- Ukuqala kwezobuchwepheshe kusuka kuMessina uyama at eTurin encazelweni yezivumelwano zokuthengisa ezihlose ukuxhashazwa kwe isofthiwe isoftware yokuphatha Intelligence yokufakelwa ihlose ukuqondisisa futhi kusheshiswe ukubhala imibhalo yokubala.
I-GetWeb ne-Xriba: isoftware yezinguquko ezothuthukisa umhlaba we-accounting.
Woza esigabeni esisha ku- I-Roadshow, lokho eTurin, abamele I-TrovaWeb uphumelele ebhizinisini elisha nelithokozisayo: I-Italian qala empeleni sekuyinto umthengisi ogunyaziwe con gunyaza ngqo i-del Isoftware ye-AI Xriba. Theukuhlakanipha okungekhona okwangempela for the advanced accounting uzothatha umhlalaphansi i-accountant yakudala, asebenzise uchungechunge lwentuthuko ukusebenza kwezibalo ozoklama eyakho ngokuzimela imibhalo yokubala. Isoftware iyakwazi ukuhlaziya i isimo sezezimali futhi unikeze izeluleko ze nokwandisa la izindleko futhi i ukutshalwa kwezimali.
I-Xriba: i-accountant ngaphakathi kohlelo lokusebenza
Idizayinelwe ukusetshenziswa ngendlela elula nenengqondo, Xriba può ukuskena yakho imibhalo yokubala futhi ukhiphe yonke imininingwane edingekayo yokulungiselela ukubuyiselwa kwentela futhi unakekele ukubalwa kwemali kwakho, njenge-a umeluleki webhizinisi esperto. Umbono omusha, indlela entsha yokubhekana nezwe eliyinkimbinkimbi ye accounting, ezoshintsha izindlela zendabuko ezinciphisa ukukhiqizwa futhi ngenxa yalokho inzuzo engenzeka.
Indawo entsha yokujika emkhakheni wezentengiso: ITrovaWeb futhi ibeka ifulegi eTurin
I-TrovaWeb ayiyeki: a eTurin abaphathi bathatha leli thuba ukwenza okusha izivumelwano zentengiso, ngenxa yokusekelwa kwezibalo eziqeqeshiwe kakhulu. Namuhla kuboniswe ngempumelelo kozakwethu abasha ukuthi ingakanani insizakalo ukubekwa ukulandela izinjini di ricerca inikezwe amandla yi I-TrovaWeb Yiba nokuncintisana futhi usebenze kahle. Ngenxa yokubekezelela okukhulu kwabaphathi kanye nokulamula kwe Udokotela Gianluca Chiesa, futhi ukuze eTurin la Isiqalo SamaNtaliyane Esisunguliwe wenze eziningi ezintsha collaborations ngephrofayili ephezulu yobuchwepheshe.
Tags: izivumelwano zentengiso ukuphathwa kwezimali ubuhlakani bokufakelwa isoftware management accounting
Categories: Ukumaketha ngebhizinisi, Qalisa